Welcome to Chan Mya Tharsi
မွို့နယျ Chan Mya Tharsi ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ အမရပူရမွို့နယျ အောငျမွသောစံမွို့နယျ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သည် မန္တလေးမြို့၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း (၁၄) ရပ်ကွက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် နှင့် အမရပူရမြို့နယ် ၊ မြောက်ဘက်တွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အမရပူရမြို့နယ် တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် (၂၅၆) ပေ အမြင့်တွင် တည်ရှိပါသည်။
အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် (၂၅.၈) ဧရိယာစတုရန်း ကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာလျှင် (၁၁၀၁.၅) ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံး ကောက်ယူသော သန်းခေါင် စာရင်းအရ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၃၀၄၇) စုခန့် နေထိုင်လျှက်ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၈၃၇၈၁) ဦးမျှ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်တွင် ဆိုင်၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပေါင်း (၆၄၀၀) ကျော် တည်ရှိပြီး ယင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်း အရေအတွက် (၃၅၀၀၀) ကျော်ခန့် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးလမ်းညွှန် မှ ကောက်ယူ ရရှိထားသော စာရင်းများအရ သိရှိရပါသည်။ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း (၁၇) ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၅) ကျောင်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်း (၉) ကျောင်းတည်ရှိပြီး မြို့နယ်၏ စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်မှာ (၀၅၀၄၁) ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည့် မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး တည်ရှိရာ မြို့နယ်လည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဘောလုံးကွင်းများ၊ အဆင့်မြင့်ဈေးများ၊ လူနေတိုက်ခန်းများ၊ ခေတ်မီ အဆောက်အဦများနှင့် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော မြို့တော်၏ အဂါင်္ရပ်များကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်နိုင်ရာ မြို့နယ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Population In Conventional HouseHolds 267,247 267,247
Number Of Convetional Households 53,047 53,047
•In Chanmyatharzi Township, there are more females than males with 94 males per 100 females.
•In Chanmyatharzi Township, entire population live in urban areas.
•The population density of Chanmyatharzi Township is 11,002 persons per square kilometre.
•There are 5.0 persons living in each household in Chanmyatharzi Township. This is slightly higher than the Union average.
Productions 179 2259
Retails 2734 10905
Wholesales 379 2267
Services 3153 18909
Trading 49 685
All about Chan Mya Tharsi
: Dr Sai Hla Thein
: 09 798 744 183
: U Tun Tun Oo
: 024075808, 024061062
: U Tin Aung
: U Myint Aung Moe
: 09 448 548 558
Address : Ma (23,1Kha), Theinpan St, Bet; 66th St & 67th St,,
Phones : 02-2848124, 02-2848125
Category : Sculptors [Stonecarving]
Address : Blk 504, Aung Myay Ward, Near of Thar Taw Ya Payar, Kyun Lone Oak Shaung,
Phones : 09-5004014, 09-5010199
Global Kyaw Construction & Decoration Co., Ltd.
Address : Sa Laie Sa Laie-3/51, Bet; 57 St. and 58 St. & Bet; Aung San St. and Aung Zayya St., Myittar Lane.,
Phones : 09-421166669, 09-781166669
Category : Investment Companies